बजेट निर्माणमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय
बजेट निर्माणमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय
प्रकाशकराष्ट्रिय टाईम्स — 4/02/2021 10:32:00 am 0
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट निर्माणका लागि जुटेको छ।हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटेको हो ।
बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी सहित सहसचिवहरुले साथ दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेल बजेट निर्माणलाई तिव्रता दिन सबेरै अर्थ मन्त्रालय आउने गरेका छन् ।
अहिले अर्थमन्त्रालयले विभिन्न पाँच टोली बनाएर बजेट निर्माणमा जुटेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय अन्र्तगतका विभिन्न ५ महाशाखा प्रमुखलाई संलग्न गरेर बजेट निर्माणको टोली बनाइएको छ । सो टोलीका संयोजक आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे रहेका छन् । त्यस्तै, सदस्यहरुमा वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्मा, योजना मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुमन दाहाल र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामेश्वर दंगाल रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो टोली बजेट निर्माणका लागि विहानैदेखि खटिन थालेको छ । साथै अर्थमन्त्री पौडेलसहित बजेट निर्माण टोलीले अन्य भेटघाटलाई समेत कम गरेको छ ।
बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव माग गरिरहेको छ । मन्त्रालयले आगामी वैशाख ५ गतेभित्र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले सुझाव पठाउन भनेकोे छ । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री पौडेलका आर्थिक सल्लाहाकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक) समेत बजेट निर्माणमा होमिएका छन् । उनले नीतिगत सुझाव संकलन गरी विश्लेषण सहित बजेट निर्माणमा योगदान गर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै, बजेट निर्माण टोलीले राजश्व, उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजिवी, विभिन्न पेशाकर्मी, नागरिक समाज, लगायत सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्न राजश्व परामर्श समिति गठन समेत गठन गरेको छ। महेश दाहाल नेतृत्वको सो समितिले दाहाल मुलुकका विभिन्न स्थानबाट राजश्व सम्बन्धी सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बजेट टोलीले सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय लगायत सरोकारवालासँग बजेटमा समावेश गरिनु पर्ने कार्यक्रम तथा बजेट रकमबारे छलफल गरिहेको स्रोतले जनाएको छ ।
के – के छन् प्राथमिकतामा ?
सरकारले हरेक वर्ष प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। अहिले बजेट निर्माणका लागि प्रारम्भिक छलफल शुरु गरिएकाले अहिले नै प्राथमिकताका क्षेत्र तय भइसकेका छैनन् । तर कोरोनापछिको यो दोस्रो बजेट भएकाले कोरोना न्यूनिकरणका लागि सरकारले स्वाथ्यमा ठूलो आकारको बजेट छुट्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसो त कोरोनाको भयावह स्थितीका बेला अधिकांश मानिसहरु कृषिमा आकर्षित देखिएकाले कृषि पनि प्राथमिकतामा पर्दैछ ।
शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, बाटोघाटो, खानेपानी लगायत प्राथमिकतामा पर्न सक्ने स्रोतको भनाई छ।
बजेटको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्री पौडेलले ठूला र महत्वकांक्षी आयोजनाहरुका लागि बजेट नमाग्न यस अझै विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिलाई क्रमिक रुपमा न्यूनिकरण गर्न तथा बढी प्राथमिकता भएका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस्ता महत्वकांक्षी आयोजनाहरुमा बजेट माग नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसका साथै सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकार समेत घटाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने उनी नेतृत्वको सकरकारको संभावतः अन्तिम बजेट हुने भएकाले लोकप्रियताका लागि बजेटको आकार बढाउन सक्ने संभावना रहेको पनि बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्धभत्ता बढाइने बताएका छन् । त्यसका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि छरुवा बजेट आउन सक्ने संभावना बलियो रहेको स्रोत बताउँछ। अर्थमन्त्री पौडेलको यो दोस्रो बजेट हो । उनी भूकम्प तथा नाकाबन्दीपछि अर्थमन्त्री बनेका थिए । उनले त्यसताका १ हजार रहेको वृद्धभत्ता १ हजार बढाएर २ हजार पु-याएका थिए । उनले कर्मचारीको तलब पनि २० प्रतिशत बढाएका थिए । गत वर्ष कोरोनाका कारण नबढेको वृद्धभक्ता यसपाली बढ्ने भएको छ।